China 316L 316 eshushu liqengqiwe ipleyiti steel ukwenziwa kunye mveliso | IHuaxiao
I-316 yintsimbi ekhethekileyo engenasici, ngenxa yokongezwa kwezinto ze-Mo kukumelana nokubola, kwaye amandla aphezulu obushushu aphuculwe kakhulu, amaqondo obushushu aphezulu ukuya kuthi ga kwi-1200-1300 degrees, anokusetyenziswa phantsi kweemeko ezinzima. I-316L luhlobo lwe-molybdenum ene-stainless steel. Ngenxa yomxholo we-molybdenum kwisinyithi, intsebenzo iyonke yentsimbi ingcono kunaleyo ye-310 kunye ne-304 ye-stainless steel. Ngaphantsi kweemeko zobushushu obuphezulu, xa uxinizelelo lwe-asidi ye-sulfuric ingaphantsi kwe-15% okanye ngaphezulu kwe-85%, i-316L intsimbi engenasici inoluhlu olubanzi. sebenzisa. I-316L insimbi engenasici nayo inokuchasana nokuhlaselwa kwe-chloride kwaye ke isetyenziswa rhoqo kwiindawo zaselwandle. I-316L insimbi engenasici inomxholo ophezulu wekhabhoni we-0.03 kwaye inokusetyenziswa kwizicelo apho ukufakelwa kungenzeki kwaye ukumelana nokubola okuphezulu kuyafuneka.
Sino Stainless Capacity malunga 316L 316 Kushushu liqengqiwe intsimbi engenasici ipleyiti, 316 316L HRP, PMP
Ubunzima Pallet: 0.5MT-3.0MT
Thelekisa i-316L / 316 kunye ne-304 yesicelo sensimbi engenasici
I-304 yensimbi inokumelana nokubola kwe-asidi ye-sulfuric, i-phosphoric acid, i-formic acid, i-urea, njl njl. Ifanelekile ukusetyenziswa kwamanzi ngokubanzi, kwaye isetyenziselwa ukulawula igesi, iwayini, ubisi, i-CIP yokucoca ulwelo kunye nezinye izihlandlo ngonxibelelwano oluncinci okanye olungenanto ngezixhobo. Grade 316L intsimbi longeze element molybdenum ngokusekelwe 304, nto leyo ukuphucula kakhulu ukuxhathisa yayo umhlwa intergranular, oxide uxinzelelo umhlwa kunye nokunciphisa nokuqhekeka ashushu nokuqhekeka ngexesha welding, kwaye kananjalo nokumelana elungileyo umhlwa chloride. Ihlala isetyenziswa emanzini acocekileyo, amanzi afihliweyo, amayeza, iisosi, iviniga kunye nezinye iimeko ezinemfuno zempilo ephezulu kunye nokuqina kwemithombo yeendaba. Ixabiso le-316L liphindwe kabini kunelo le-304. Iipropathi zoomatshini ezingama-304 zingcono kune-316L. Ngenxa nokumelana kunye nokumelana egqwesileyo ubushushu ka-304 no-316, lisetyenziswa njenge insimbi. Amandla nobunzima be-304, 316 ziyafana. Umahluko phakathi kwezi zimbini kukuba ukumelana nokubola kwe-316 kubhetele kakhulu kunoko kuka-304. Eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba isinyithi se-molybdenum songezwa ku-316, esiye saphucula ukumelana nobushushu.
Singasebenzisa isinyithi esinyibilikayo okanye esinyibilikisayo ukuqinisekisa umphezulu wentsimbi yekhabhoni, kodwa olu khuselo yifilimu kuphela. Ukuba umaleko okhuselayo utshatyalalisiwe, intsimbi engaphantsi kwayo iqala ukurusa. Ukuxhathisa umhlwa kwentsimbi engenasici kuxhomekeke kwinto ye-chromium. Xa isixa se-chromium esongeziweyo sifikelela kwi-10.5%, ukumelana nokubola komgangatho wentsimbi engenasici kuya kunyuka kakhulu, kodwa ukuba umxholo we-chromium uphezulu, nangona inokuphucula ukunganyangeki okuthile. Kodwa ayicacanga. Isizathu kukuba olu nyango lutshintsha uhlobo lwe-oxide yomphezulu kwi-oxide yomphezulu efanayo naleyo yenziwe ngentsimbi ye-chrome emsulwa, kodwa lo maleko we-oxide ubhityile kakhulu, kwaye unokubona ngokuthe ngqo ubumenyemenye bendalo bomphezulu wentsimbi. Ukwenza i-stainless steel have a unique surface. Ngapha koko, ukuba umphezulu utshatyalalisiwe, umphezulu wesinyithi ocacileyo uya kuyiphendula imeko-bume. Le nkqubo iyinkqubo yokulungisa ngokwakho, ebuye yenze ifilimu yokuhamba kwaye ingaqhubeka nokukhusela. Ke ngoko, zonke ii-steels ezingenasici zinento efanayo, oko kukuthi, umxholo we-chromium ungaphezulu kwe-10.5%, kwaye inqanaba lesinyithi elikhethwayo likwanayo ne-nickel, enje nge-304. Ukongezwa kwe-molybdenum kuyaqhubeka kuphucula umhlwa womoya, ngakumbi ngokuchasene neatmosfera eziqulathe i-chloride, Yiyo imeko eyi-316.
Kwezinye iindawo zemizi-mveliso kunye neendawo ezingaselunxwemeni, ungcoliseko lubi kakhulu, umphezulu uya kuba mdaka, kwaye nomhlwa sele uvele. Nangona kunjalo, ukuba kusetyenziswa i-nickel enentsimbi engenasici, isiphumo sobuhle kwimeko yangaphandle sinokufunyanwa. Ke ngoko, udonga lwethu oluqhelekileyo lwekhethini, udonga olusecaleni kunye nophahla lukhethwe kwi-304 yentsimbi engenasici, kodwa kwezinye izinto ezinobundlobongela kwimizi-mveliso okanye elwandle, i-316 yentsimbi engenasici yinto elungileyo.
304 18cr-8ni-0.08c Ukumelana ne-corrosion elungileyo, ukumelana ne-oxidation kunye nokusebenza kwayo, ukumelana ne-acid ye-aerobic, kungafakwa isitampu, kungasetyenziselwa ukwenza izikhongozeli, i-tableware, ifanitshala yesinyithi, umhombiso wokwakha kunye nezixhobo zonyango
I-316 18cr-12ni-2.5Mo ixhaphake kulwakhiwo lwaselwandle, iinqanawa, i-electrochemistry yenyukliya kunye nokutya izixhobo. Ayiphuculi nje ukumelana nokubola kwemichiza yehydrochloric acid kunye nolwandle, kodwa ikwaphucula ukumelana nokubola kwesisombululo se-brine halogen.
Egqithileyo I-310s eshushu eshushu yentsimbi
Okulandelayo: ingqele eqengqwe ngentsimbi engenasici